Ntuziaka nke nkà mmụta ọgwụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ntuziaka nke nkà mmụta ọgwụ
Ezi mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn: ọ dị adị?
Echere m na ọtụtụ n'ime gị bịara n'echiche nke ihe mere isi ihe maka nduku nduku bụ tubers, ọ bụghị mkpụrụ ya? Mkpụrụ mkpụrụ nke mkpụrụ osisi nduku nwere ike ịdị oke ike maka onye nkịtị? Ma ọ bụ osisi chọrọ ọnọdụ ọ bụla pụrụ iche maka ibu? N'ezie, usoro a dị oke ọnụ maka onye ọ bụla, yana nwekwara ọtụtụ uru.
All uru Njirimara nke mandarins na contraindications
Mandarin bụ osisi a na-agbanye n'ọkụ nke ọkara (ihe ruru mita anọ n'ịdị elu) ma ọ bụ ohia. Mkpụrụ osisi Citrus na-eru isii sentimita gburugburu. Ụdị mkpụrụ osisi ahụ dị ka bọlbụ elu na n'elu. Akpụkpọ osisi ahụ dị mkpụmkpụ, na-adọrọ mmasị na lobulu ahụ. Mkpụrụ ahụ mejupụtara mpekere 8-13, kemmiri ihe na ụtọ ma ọ bụ uto-ụtọ na uto.
Siria syrup: ngwa, ọgwụ na-emerụ Njirimara
Syroacan vatochnik enweghị njikọ ọ bụla na Siria, ebe onye nchọpụta ahụ mere ka ọ ghara ikpo ọkụ, nke bụ Middle Eastern plant. A na-akpọ osisi a oke ahịhịa, ma ọ bụ perennial. Onye na-eme mgbidi Syriac abata na ezinụlọ Kutrov ma nwee nkọwa na-esonụ: Osisi ahụ na-eto ruo 2 m. Akwụkwọ ya dị obosara, yiri akwa na-etolite ruo 25 cm n'ogologo na 12 cm n'obosara.
Kedu mgbe m nwere ike iji ya, ihe bara uru na otu esi esi esi nri
Brier bụ otu n'ime ụdị ọhịa nke ezinụlọ Pink. Ọ bụ ezie na ịkpọ oku osisi a ugbu a anaghị edozi ya, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ezinụlọ na ụlọ okpomọkụ, ọ na-eto eto dịka ọdịbendị. Ka anyị kwuo banyere uru bara uru nke ọhịa ọhịa, karịsịa, banyere infusion nke akụkụ ya.